Waa kuwee Wadamada Bariga Africa ee looga arinsayay Shirkii Wadatashiga?(Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Waa kuwee Wadamada Bariga Africa ee looga arinsayay Shirkii Wadatashiga?(Dhagayso)
On Apr 4, 2020 567 0
Shirkii wadatashiga arimaha Jihaadka bariga Africa, wuxuu dhaliyay hadal heyn ballaaran iyo falcelinno kala duwan, waxaana si isku mid ah ula tacajubay dadka jecel halganka ay wado Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo xitaa kuwa kasoo horjeeda.
Warbixintan, waxaan kusoo gudbin doonnaa wadamada la isku yiraahdo bariga Africa, iyo xaaladda dhabta ah ee ay ku noolyihiin Muslimiinta ku dhaqan wadamadaas.
Mustalaxa bariga Africa, waxaa si guud loogu yeeraa dowladaha dhaca bariga qaarada weyn ee Africa, waxaana si guud bariga Africa u hoos yimaada mandiqado dhowr ah oo ay ku jiraan geeska Africa iyo Waadi An-Niil, mandiqad kastana waxaa ku yaala dowlado gaar ah.
Haseyeeshee, marka lagu dhawaaqo dowladaha bariga Africa, wuxuu maanka dadka, gaar ahaan dadka u dhuun daloola arimaha Juqraafiga kusoo dhacaya todobo dowladood oo kala ah Kenya, Uganda, Tanzaniya, Ereteriya, Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliya.
Haddii aynu ku hormarno wadanka Kenya, waa dal dhaca dhanka bari ee qaaradda Africa, wuxuuna u dhexeeyaa wadamada Soomaaliya iyo Tanzaaniya. Wuxuu xuduud la wadaagaa wadama ay kamid yihiin Taznaaniya oo kaga beegan koonfurta, Suudaan iyo Itoobiya oo ka xiga dhanka wuqooyi, bariga oo ay Soomaaliya kaga beegantahay, iyo galbeedka oo uu ka xigo dalka Uganda.
Magaala madaxda Kenya, waa Nairoobi oo ku taalla bartamaha dhanka koonfureed ee wadanka, waxaana masaaxo ahaan dalka Kenya lagu sheegaa 580,367 km laba jibaaran, sidaasna wuxuu dalkan kaalinta kontanaad kaga galayaa dowladaha ugu masaaxada ballaaran caalamka.
Tirada guud ee dadka ku nool Kenya, waxaa lagu sheegaa 50 milyan ruux, sida lagu ogaaday tirakoob la sameeyay sanadkii 2018-ka, waxaana 35% dadkaas ay yihiin dad Muslimiin ah, kuwaas oo badankood dega Mombasa, Laamu iyo dhulka NFD ee ay Soomaalidu degaan, Ingiriiskuna siiyay Kenya.
Marka laga hadlo xaaladda guud ee Muslimiinta Kenya, waxay wajahayaan culeesyo amni iyo dhibaatoyin joogta ah oo uga imaanaya laamaha amniga ee dowladda Kenya, waxaana si gaar ah loo bartilmaameedsadaa culimada Muslimiinta, Aqoonyahannada iyo dadka waxgalka u ah bulshada Muslimiinta.
Waxaa gacanta dowladda Kenya ku baxay culimo caan ka ahaa wadankaas oo faafin jiray diinta Islaamka, kuwaas oo ay kamid yihiin Sheekh Cabuud Rooqo, Sheekh Makaburi iyo daaciga Samiir Khaan.
Iyadoo ku marmarsineyso la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada ayay dowladda Kenya fulisaa howlgallo amni ah oo ka dhan ah dadka Muslimiinta, waxaana meydadka dhalinyarada muslimiinta ee ay ciidamadu Kenyaatigu dilaan lasoo dhigaa wadooyinka.
Marka laga soo tago dadka Muslimiinta ah ee ay dowladda Kenya dishey, waxaa jira kumanaan kale oo ku xiran xabsiyada, kuwaas oo la kulmaya tacadiyaad joogta ah, islamarkaana aaney jirin wax maxkamad ah oo lasoo taagay.
Halkan ka dhagayso Warbixinta oo dhameystiran kana hadleysa wadamada Bariga Africa.
Axmad 3770 posts 8 comments
Beelaha Tunni iyo Ciroolle oo Diyo kala qaatay. (Dhagayso)
Qarax ay ku dhinteen Saraakiil katirsan maamulka Jubbaland Oo ka dhacay Kismaayo.
Axmad	 Sep 28, 2021 0
Dagaallo Aad U Qaraar Oo Ka Holcaya Dhowr Gobol Oo Itoobiya Ah.…
Qarax ay ku dhinteen Saraakiil katirsan maamulka Jubbaland Oo ka…
Weeraro lagu qaaday Saldhigyada Xabashida ku leeyihiin Baardheere.